I-Silica ehlanganisiwe, i-Quartz ehlanganisiwe, i-Quartz Powder - iDinglong
I-Dinglong Quartz Limited yinkampani yokukhiqiza i-quartz ekomkhulu layo i-Jiangsu China. UDinglong ubelokhu enza ucwaningo futhi ekhiqiza izinto ezinhle ze-quartz kusukela ngo-1987. Uhla lomkhiqizo lufaka phakathi i-silica ehlanganisiwe, i-quartz ehlanganisiwe, i-quartz powder, i-quartz tube ne-quartz crucible. Izinto nemikhiqizo ye-quartz ka-Dinglong kulezi zinsuku isetshenziswa kabanzi kwezokuphikisa, i-elektroniki, i-solar, isisekelo kanye nezinye izinhlelo zokusebenza ezikhethekile futhi kusatshalaliswa ezimakethe zasekhaya kanye nasezimakethe zaphesheya kwezilwandle.
Ukuhlanzeka okuphezulu kufakwe i-silica (99.98% amorphous) Kutholakala kuwo womabili amafulawa kanye namafomu okusanhlamvu Mat ahlukahlukene ...
Ukuhlanzeka okuphezulu kufakwe i-silica (99.98% amorphous) Izakhiwo zokukhulisa ukushisa okuphansi zinikeza ukushisa okuphezulu ...
Ubumsulwa obuphakeme buhlanganiswe i-silica (99.98% amorphous) I-coefficient yokwanda okushisayo okuphansi, isokhemisi elingaguquguquki ...
Umkhiqizo we-Quartz othembekile womkhiqizo uyisitsha esidingekayo ekukhiqizeni ama-monocrys ...
Ukukhanyisa Sinemikhiqizo eminingi ebanzi yamashubhu e-quartz wezinhlelo zokukhanyisa futhi angakwazi ngokuphelele ...
Ubumsulwa obuphezulu be-quartz powder (99.3% crystalline) Ubulukhuni obuphakeme be-7 (Mohs) Ukumelana namakhemikhali okuphezulu L ...
I-silica ehlanganisiwe yinto evikela ngokweqile enokuqhutshwa okushisayo okuphansi kakhulu. Ngokumelana nokushaqeka kwayo okushisayo okukhulu, kuvame ukusetshenziselwa ukufaka izicelo ezinjenge-aluminium launders noma izinhlelo ezijikelezayo kakhulu.
Ekusakazweni kokutshalwa kwezimali, i-silica ehlanganisiwe isetshenziselwa ukuqina kwevolumu yayo. I-silica ehlanganisiwe ine-coefficient yokwanda okushisa okuphansi kakhulu futhi ukuqina kokubekezelelana okuqinile kakhulu kungakhiqizwa ngokususwa kwegobolondo okulula.
I-silica yethu ehlanganisiwe ine-resistivity ephezulu kakhulu kagesi kanye ne-conductivity ephansi yokushisa, ngakho-ke ijwayele ukusetshenziswa embonini ye-elekthronikhi njengokugcwalisa kumakhemikhali wokubumba epoxy ama-semi-conductor.
Amandla Okukhiqiza Anamandla
Ngeminyaka engama-30 yokusungulwa, uDinglong uzuze ukusekelwa okuqinile kwemishini nobuchwepheshe futhi waqongelela okuhlangenwe nakho okukhulu ngokukhiqiza izinto ezinhle ze-quartz.
Ikhwalithi Yomkhiqizo Ophakeme
Ukuhlinzeka ngezinto ze-quartz zekhwalithi ephezulu nenani kuyinjongo yethu. Sikholelwa ukuthi imikhiqizo ethembekile ingasisiza ukuthola ukuthengisa kobuholi futhi sakhe ukuthembana nobungani namakhasimende ethu.
UDinglong ukholelwa ukuthi ukuqalwa okuqhubekayo yilokho okuqhubekisela phambili inhlangano phambili. Ukuphila ezweni elisheshayo, sikholwa ukuthi ukuzivumelanisa nezinto ezintsha kuzoholela emathubeni amakhulu wokunqoba imincintiswano nokuhlala uhambelana namakhasimende.
Ukuhlinzeka ngezinto ze-quartz zekhwalithi ephezulu nenani.